पाठेघरको क्यान्सर धेरै, कसरी हुन्छ पाठेघरको क्यान्सर ?
विकासोन्मुख देशका महिलामा पाठेघरको क्यान्सर धेरै देखिने गरेको पाइएको छ । नेपाल प्रहरी श्रीमती सङ्घ, नेपाल प्रहरी अस्पतालको आयोजना तथा टोखा नगरपालिकाको सहकार्यमा आज आयोजित ‘महिलामा हुन सक्ने क्यान्सरसम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम तथा निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच’का वक्ताले अल्पविकसित मुलुकका महिलामा पाठेघरको क्यान्सर धेरै हुने गरेको जानकारी दिइएको हो ।
कार्यक्रममा नेपाल प्रहरी श्रीमती सङ्घका अध्यक्ष प्रमिला खनालले नेपालमा वर्षेनी क्यान्सरका कारण हजारौँ महिलाले अकालमा ज्यान गुमाउनुपरेको बताउँदै उक्त रोगबाट बच्न श्रीमती सङ्घले जनचेतनामूलक तथा निःशुल्क स्वास्थ्य जाँचको कार्यक्रम सञ्चालन गरेको बताए ।
“पाठेघरको क्यान्सरबारे आम महिलामा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यक छ,«”–उनले भने । अध्यक्ष खनालले अपराध रोकथाम र सामाजिक सुरक्षा अभिवृद्धिमा नेपाल प्रहरी श्रीमती सङ्घले नेपाल प्रहरीसँगको सहकार्यमा समुदायलक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरेको जानकारी दिए ।
टोखा नगरपालिकाका प्रमुख प्रकाश अधिकारीले महिलामा हुने विभिन्न प्रकृतिका रोगको उपचारका लागि नगरपालिकाले सङ्घ संस्थाको सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको जानकारी दिए । “जनताको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै नगरपालिकाले चाँडै नै नगरस्तरीय अस्पताल सञ्चालन गर्न लागेको छ,”–उनले भने । नगरपालिकाका उपप्रमुख ज्ञानमाया डङ्गोलले महिलामा पाठेघर क्यान्सरको समस्या व्यापक रुपमा देखिँदै गएकाले उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको जानकारी दिए ।
“महिलाले आफूमा भएको समस्या चिकित्सकका माझ खुलस्त रुपमा राख्नुहोस्,”–उनले भने । विश्वमा पाँच लाख २८ हजार महिलामा पाठेघरको क्यान्सर देखिएकोमा ८० प्रतिशत अविकसित मुलुकका महिला रहेको नेपाल प्रहरी अस्पतालका प्रहरी नायब महानिरीक्षक आशा सिंहले जानकारी दिए । सानो उमेरमा विवाह, यौन व्यवसायमा लाग्ने, बढी मात्रामा मादक पदार्थ सेवन गर्ने महिलामा धेरै पाठेघरको क्यान्सर हुने गरेको सिंहले बताए ।
पाठेघरको क्यान्सर कसरी हुन्छ ?
कुनै निश्चित कारणले पाठेघरको मुखको क्यान्सर हुन्छ भनेर किटान गर्न नसकिने भएपनि एचपीभी (ह्युमेन पापिलोमा भाइरस) नै यसको मुख्य कारण हो । करिब ७० प्रतिशत पाठेघरको मुखको क्यान्सर एचभीपीसँग सम्बन्धित रहेको पाइएको छ । एचपीभी एक साधारण भाइरस हो, जुन यौनसम्पर्क मार्फ एक अर्कामा सर्ने गर्दछ ।
यौनकार्यमा सक्रिय ५० देखि ८० प्रतिशत महिलालाई जीवनमा कम्तीमा एक पटक उक्त भाइरसले संक्रमित गर्ने गरेको छ । एचपीभी धेरै प्रकारको भए पनि १३ प्रकारको भाइरसले मात्र पाठेघरको मुखको क्यान्सर निम्त्याउँछ । एशियामा ८३ प्रतिशत पाठेघरको मुखको क्यान्सर एचपीभी १६ तथा १८ को संक्रमणले भएको पाइएको छ । एचपीभी शारीरिक सम्पर्कको क्रममा छालाबाट छालामा फैलिन्छ । यस्ता विषाणुले गर्भाशयको मुखको कोषिकाको प्रोटिनसँग एचभीपीको प्रोटिनको रासायानिक प्रक्रिया हुँदा ती कोषिकाहरुमा परिवर्तन ल्याउँछ र जुन वर्षौंपछि क्यान्सरमा परिणत हुन्छ ।
कम उमेरमा विवाह हुनु, कम उमेरमै यौन सम्पर्क स्थापित हुनु, एक भन्दा बढी जना सँग यौनसम्पर्क राख्नु, कम उमेरमा अनि धेरै बच्चा पाउनु, आफ्नो गोप्य अङ्गको उचित सरसफाई नगर्नु, चुरोट खैनी तथा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गर्नु, यौनरोग एवं गुप्ताङ्ग सम्बन्धी दीर्घरोगी हुनु पाठेघरको मुखको क्यान्सर लाग्नाको प्रमुख कारणहरु हुन् । तर ह्युमेन पापिलोमा भाइरसलाई प्रमुख कारक तत्व मानिएको छ ।
पाठेघरको मुखको क्यान्सरको शुरुवाती अवस्थामा कुनै लक्षण चिन्ह नभए पनि शारीरिक जाँच गर्दा केही चिन्ह भेटिनसक्छ । महिनावारी सुकीसकेकी प्रौढ महिलामा फेरि रगत तथा रगत मिसिएको योनीश्राव देखा पर्न सक्छ । त्यसैगरी यौनसम्पर्क पश्चात् रगत देखापर्ने सिकायत हुनसक्छ । गोप्यअङ्गबाट असामान्य प्रकारको गन्हाउने श्राव बग्न सक्छ । महिनावारी सुकी नसकेकी महिलामा महिनावारीका बेला धेरै दिनसम्म वा बढी मात्रामा रगत बग्न सक्ने हुन सक्छ । यो रोगको प्रारम्भिक स्थितिमा कुनै पीडा हुन्न । दुख्न लाग्दा क्यान्सर पैmलिसकेको हुन्छ । यो रोग निकै फैलिसकेपछि खुट्टा सुन्निने, पेट फुल्ने, पिसाब नहुने, कम्मरको हड्डी दुख्ने आदि पनि हुन्छ ।
निदानको तरिका तथा उपचार
मानव शरीरमा लाग्ने विभिन्न खालका क्यान्सरहरुमा पाठेघरको मुखको क्यान्सर मात्र यस्तो क्यान्सर हो जसको क्यान्सर पूर्वको अवस्था सजिलै पत्ता लगाउन सकिन्छ । केहि मिनेटमा नै सकिने यो परीक्षणको क्रममा नदुख्ने र बेहोश गराउन नपर्ने हुन्छ । प्याप स्मियर नामक साधारण जाँचबाट पाठेघरको मुखको श्राव निकाली क्यान्सर छ छैन थाहा पाउन सकिन्छ । यसको अलावा एसिटिक एसिड वा ल्युगोल आयोडिनको प्रयोगबाट पनि थाहा पाउन सकिन्छ ।
२५ वर्ष काटिसकेकी विवाहित महिलाले सकिन्छ भने वर्सेनी प्याप स्मियर परीक्षण गराउनु बुद्धिमानी हुन्छ । पाठेघरको मुखको क्यान्सर ठ्याक्कै लागेको छ छैन थाहा पाउन पाठेघरको मुखको सानो टुक्रा मासु निकाली (बायोप्सी) गर्नु पर्दछ भने पाठेघरको मुखको क्यान्सरको थप जानकारीका लागि अथवा अन्यत्र भागमा फैलिएको छ छैन थाहा पाउन भिडियो एक्सरे (अल्ट्रासाउण्ड), सीटी स्क्यान, आईभीयू, एक्सरे गराउनु पर्ने हुन्छ । पाठेघरको मुखको क्यान्सर शुरुको अवस्थामा पत्ता लागे शतप्रतिशत निको पार्न सकिन्छ । पाठेघरको मुख सहित पाठेघर निकाल्ने शल्यक्रिया गरिन्छ । रोग पैmलिसकेको अवस्थामा रेडियोथेरापी वा केमोथेरापी (विशेष औषधि) को प्रयोगद्वारा उपचार गरिन्छ । रेडियोथेरापी योनीमा मात्र वा शरीरको बाह्य भागमा दिइन्छ ।
कारक तत्वलाई विचार गरेर कलिलै उमेरमा विवाह नगर्ने, बालविवाहलाई निरुत्साह गर्ने, धेरै बच्चा नपाउने, निश्चित अन्तरालमा मात्र बच्चा पाउने, गोप्य अङ्गको सरसफाईमा ध्यान दिने, धेरै जनासँग यौनसम्पर्क नराख्ने, चुरोट खैनी तथा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन नगर्ने, यौनरोग एवं गुप्ताङ्गसम्बन्धी रोगको समयमै आवश्यक उपचार गराएमा यो रोगबाट बच्न सकिन्छ । पाठेघरको मुखको क्यान्सर रोकथाम गर्न सकिने रोग हो भन्ने कुरा राम्ररी मनन गर्नुपर्दछ ।